Zines - Gargaarka Gargaarka ee Musiibada
Bogga ugu weyn/Zines
Tilmaamaha Banaanbaxa ee Kajawaabidda Dhaawaca Rasaasta
Dhaawaca rasaasta ayaa ku soo badanaya banaanbaxyada. Tan macnaheedu maahan inaad argagaxdid — malaayiin dad ah ayaa kaqeybgalay banaanbaxyo afartii bilood ee lasoo dhaafay, halka tobanaan kaliya la toogtay.
Waraaq Jacayl ah oo Mustaqbalka
Iscaawinta labada dhinac iyo awoodda dhismaha inta laydhadhku bakhtiyayaan.
Daaqad Lagu Xiray Furan I: Waqtiyada
Qalalaase iyo fursad ka jirta duufaanta Harvey.
Dhammaanteen waxaan wada nahay midba midka kale: Tilmaanta loo Abuuro Maskaradaha Weelka
Zine-kaani waxaa lagu mideeyaa jacayl badan iyo u heellan xagga wanaagsanaanta wadajirka ah. Waxaan rajeyneynaa in dhammaantiin la idin xusuusiyo in xilliyada dhibaatooyinka, bulshada siyaabo badan ay had iyo jeer isu muujiyaan midba midka kale. rajadeenu waa in qalabkan iyo wixii ku soo kordha abuurkiina lala wadaago / loo qaybiyo kuwa hareerahaaga ah.
Wadajirka Caafimaadka ee Rosehip
Zine-kan, waxaan la wadaagnaa ereyada shaqsiyaadkan leh
waxay nagu dhiirrigelisay sheekooyinkooda, shaqadooda iyo aragtidooda. The
anthology waxaa loo qaybiyaa laba qaybood - qaybta hore waxay sahmisaa daryeelka caafimaadka
shaqaaluhu waxay abuurayaan isbadal waxayna raadinayaan wadooyin loo maro daryeelka bukaanka lagu jiheeyo
gudahood nidaamka daryeelka caafimaadka, halka kan labaadna loo dabaaldego daqiiqado
ee caqabadaha nidaamyada dulmiga ah, duminta daryeelka aan waxtarka lahayn, iyo
dhisida shabakado kale oo iskaa wax u qabso iyo taageero ah.
Maktabadda 'Anarchist Library'
Marka maamulka dhexe uu ku guuldareysto howlaha bulshada muhiimka u ah, iskaashiga labada dhinac, wadajirka, iyo aasaaska aasaasiga ayaa si isdaba joog ah u soo baxa iyadoo dadku ay dabacsanaan ku saleeyaan shabakadaha aan rasmiga aheyn iyo ururada bulshada rayidka ah. Waxaan ka baran karnaa wax muhiim ah suurtagalnimada abaabulka jiifka ah anagoo baranayna tijaabooyinka noocaas ah.
Wadajirka Haweenka Aasiya Ameerika
Ka hortagga jirka ee dumarka Aasiyaanka Aasiyaanka ah: Daryeelka Waqtiga Coronavirus
Iyadoo cudurka faafa ee 'COVID-19' uusan naga dambeyn ama uusan naga horreeynin kaliya, zine-kan wuxuu bixiyaa wado macno looga sameynayo dhibaatada coronavirus iyada oo loo marayo dhaqammada mudada dheer ee daryeelka ee ka soo baxa taariikhda Aasiya Ameerika iyo siyaasada. Waxaan ka soo aruurineynaa xisaabaadka gacanta koowaad iyo falanqeyn ka socota bulshadayada, oo ay ku jiraan shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalaha iyo daryeel bixiyaasha jiida hore, ardayda, dadka la nool cudurada daba dheeraada, saxafiyiinta, iyo abaabulayaasha.
Libcom.org & Edmonton Ururka Saxaafadda Yaryar
Halganka Fasalka iyo Caafimaadka Maskaxda: U Noolow Si Aad Ula Dagaalanto Maalin Kale
Qoraalkan qoraalka ahi wuxuu ka soo baxayaa doodo taxane ah oo ka dhacay goleyaasha libcom.org. Waxaa si isdaba joog ah loo soo qaaday in niyadjabka, cudurada maskaxda, iyo culeyska shucuureed ay aad ugu badan yihiin dadka u dhaqdhaqaaqa xoriyadda siyaasada. Intaas waxaa sii dheer, la xanuunsashada jirro maskaxeed sida qof siyaasad firfircoon firfircoon badanaa wuxuu la yimaadaa dhibaatooyinkiisa gaarka ah. Mararka qaarkood bulshada fowdada / u dhaqdhaqaaqa ayaa ballaadhan oo taageero leh oo waxtar leh. Mararka kale, waxaan dareemi karnaa inaan ka go'nay dadka kale ee fowdada wada ah sida aan uga dareemayno bulshada inteeda kale hanti-wadaaga.
Roar Magazine iyo William C. Anderson
Dhibaatada Cimilada iyo Xaaladda Burburka
Wadajirka kacaanka ee Black Panthers miyuu jawaab ka bixin karaa ujeedoyinka dayaca ah ee gobolka ee bulshada nugul inta ay musiibooyinku socdaan?
Magazine Roar iyo Brian Tokar
Wadaag ka dhan ah jahwareerka cimilada
Aragtida iyo xaddiga cilmiga bulshada ayaa weli ah rajadayada ugu wanaagsan ee aan kaga hortegi karno mustaqbal dystopian ah oo aan si macno leh u qaabeynno qaddarka aadanaha ee meerahan.
Saldhigga Gacanta Dhaqida Gurmadka DIY
Waxaan ku siineynaa 'zine' dhex bartamaha COVID-19 ee faafa guga 2020. Ehelkayaga aan heysan guryaha si fudud uma "joogi karaan guriga haddii ay jiran yihiin" iyo "si joogto ah ayey u dhaqdaan gacmahooda" sida ay fareen siyaasiyiinta naxdinta leh, ee la saadaalinayo ma jiro qorshe aan ku hubinayno fayoobaanta ehelkayaga.
Teendhada Gurmadka Degdega ah ee DIY
Tani waa hoyga deg-degga ah ee cimilada cadeynaya oo aad u fudud (qiyaastii 1lb 5 wiqiyadood oo aan lahayn tiir & saami). In kasta oo ay jiraan naqshado dhowr ah oo loogu talagalay hoyga Tyvek, haddana waxaan ka helnay badankood kuwo aan caddayn oo aad u dhib badan baahiyahayaga.
Laga soo bilaabo Bangiyada iyo Haamaha ilaa Iskaashiga iyo Daryeelka: Qaab dhismeedka istiraatiijiyadeed ee ku-meel-gaadhka ah ee Cadaaladda ah
Waxaan u soo bandhigeynaa buug-yarahaan inuu yahay duluc yar oo ka bixitaanka dadka daneynaya
dhisidda aragti guud iyo qaab istiraatiijiyadeed oo loogu talagalay Caddaaladda Deegaanka
taas oo aan ka soocaynin aadanaha iyo dabeecadda ama sinnaanta bulshada iyo deegaanka
Daaweynta Guriga ee Xanuunada Caadiga ah
Zine-kani wuxuu bixiyaa hordhac aasaasi ah oo ku saabsan dhir-dhaqashada iyada oo ay weheliso ururinta daaweynta guriga ee dhibaatooyinka caafimaad ee caadiga ah. Macluumaadka waxaa loo abaabulaa qaybo ballaaran oo ku saleysan qaybaha jirka (madaxa, caloosha, iwm) ka dibna halkaas laga helo xaalado iyo astaamo. Way fududahay in la isticmaalo iyo hordhac wanaagsan oo ku saabsan daryeelka caafimaadka DIY.
Sida loo bilaabo Mashruuca Gargaarka Is-kaashatada Asaliga ah ee COVID-19
Waxaan go'aansanay inaan abuurno hagahan maadaama aan ogaanay in inta badan ilaha hada loo heli karo abaabulka COVID-19 ee Gargaarka Wadajirka ah aysan ku filneyn marka la barbardhigo doodaha lala yeelanayo mashaariicda kale ee Is-kaashatada iyo khibradaha aan leenahay ee aan la shaqeyneyno laba koox oo ah Gargaarka Is-kaashatada Dadka Asaliga ah (Kinłani Mutual Aid & Navajo iyo Hopi) Qoysaska Caawinta COVID-19). Tilmaamahan ka sokow, waxaan kugula talineynaa inaad si toos ah ula hadasho abaabulayaasha kale ee Aid Mutual Aid si aad u hesho dareen ah waxa qaabdhismeedka abaabulka sida ugu fiican uga shaqeyn kara aaggaaga.
Ku Noolaanshaha Musiibada
Hanjabaadda masiibo ee isbeddelka cimilada ee uu sameeyay dad-na looma tixgelin karo mustaqbalka fog. Waa horeba waa la joogaa.
Gargaarka Wadajirka ah ee Boise
Gargaarka Wadajirka ah: Wadajirka waxqabadka
Weligaa waqti ma ku bixisaa inaad ka fikirto meesha cuntada aad ka cunayso, ama dharka aad xidhato ay ka yimaadaan? Ka warran shaqada iyo qalabka galay dhismaha gurigaaga ama gaarigaaga? Looga tagay inaan iskood isu daryeelno iyadoon lahayn raaxada bulshada, in yar oo naga mid ah ayaa badbaadi doonta toddobaad. Midkeenna ma awoodi doono inuu bixiyo cuntada, daawada, dharka, hoyga, iyo wax kasta oo ay nolosheennu ku tiirsan tahay. Waan isu baahanahay.
Jane Addams Wadajir
Gargaarka Labada, Dhaawaca, iyo Resilience
Qofna ma filan karo kacdoon, kacdoon kasta, oo ka dhan ah maamul kasta, inay ku timaado dhibaato la'aan marka loo eego xaaladdiisa hore ee quusashada. Kuwo badan ayaa u dhintey oo u huray halgankii xoreynta ee aan quluubteenna ku hayno, kuwa markhaatiga furayaa iyaguna nabarro ayay wataan.
Bartamihii-Noofambar 2018, qiiq ka dhashay dabka ka holca waxa loogu yeero Kaliforniya wuxuu u leexday salka gurigeyga, oo loogu yeero Michigan, iyadoo dadka iyo dad aan bini'aadam ahayn ee ku teedsan Xeebta Galbeed ay la halgamayaan inay neefsadaan, waxay la halgamayeen inaysan u dhiman ugudambeyntii ugu dambeysay "taariikhi ah" masiibo cimilo-caasimadeed / dowlad-shidaal.
Jooji Isbahaysiga Basaasnimada LAPD
Maaha Waqti Ku Jira
Awood dhisid maahan paranoia
Roar Magazine iyo April Humble
Fur Xuduudaha: Soo dhaweynta Qaxootiga Cimilada
Shuruucda xakamaynta xuduudaha waxay u baahan doonaan in dib loo qoro si socdaalku ikhtiyaar uga dhigo kuwa ka cararaya cawaaqib xumada xasiloonida cimilada.
Roar Magazine iyo Kevin Buckland
Abaabulka Markab Sinking: Mustaqbalka Dhaqdhaqaaqa Caddaaladda Cimilada
Jawaabteena dhibaatada cimilada waxay ahayd in dib loo habeeyo kuraasta kuraasta Titanic - laakiin wax kastoo aan qabanno, ma shaqeynayaan. Waa waqtigii la isku dayi lahaa wax cusub.
Buugga Hanuuninta ee Boise Mutual Aid
Dadaalladeennu waxay ku suurtoobi karaan keliya ka-qaybgalka bulshada iyo taageerada ballaaran. Waad ku mahadsan tahay ka qayb qaadashadaada badan! Buug-gacmeedkan ayaa fikrad kaa siin doona siyaabo kala duwan oo loogu xidho cuntadayada toddobaadlaha ah iyo qaybinta qalabka badbaadada. Waxaan ku hanweynahay inaan ballaarino oo aan abuurno siyaabo dheeri ah oo kaalmooyinka is-dhaafsiga ah loogu adeegsan karo bulshadeena. Haddii aad hayso wax fikrad ah oo ku saabsan sida taas loo sameeyo, hoggaanka u qabso adoo og in bulshadeennu ay ku taageeri doonaan!
Xabsigu Ma Jiro Meesha Faafida
COVID-19 Macluumaadka maxaabiista Texas
Dib-u-fiirinta apocalypse: Manifesto ka soo horjeedka mustaqbalka-mustaqbalka
Maxaan u qiyaasi karnaa dhamaadka aduunka, hadana ma ahan dhamaadka gumaysiga? Waxaan ku noolahay mustaqbal hore oo aan tooda ahayn. Waa taariikh khiyaali ah utopian iyo himilo macquul ah. Waa amar bulsho oo caalami ah oo cuduro leh oo mustaqbal male-awaal ah, oo lagu dhisay xasuuq, addoonsiga, ecocide, iyo wadarta burburka.
Joogitaanka Caafimaadka Caafimaadsan Xiriirka: COVID19 Macluumaadka Maxaabiista
Saaxiib qaali, waxaan rajeyneynaa in fariintani ay kugu soo gaareyso caafimaad qab iyo niyad wanaagsan. Waxaan kuu soo qoreynaa aduunyada la badalay — midkeena inteena badani si dhib yar ayaanu ku aqoonsan nahay. Dhowr toddobaad gudahood, howlaheena maalinlaha ah ee shaqada, iskuulka, daryeelka caruurta, madadaalada, iyo waxyaabaha fudud sida u dukaameysiga waxyaabaha daruuriga ah ayaa si aan caadi aheyn loo sameeyay oo dib loo habeeyay qaab cusub oo caadi ah.
Xabsiyada Ka Baxsan
Badbaadinta iyo Taageerada: Ka-baxsan Xabsiyada 'Gaaban ee Loogu Taakuleynayo Dadka Jecel
Nidaamka carceral waa ficil dagaal oo ka dhan ah dadka dambiilayaasha ah - si aan kala sooc lahayn u ah Madoow, asal ahaan, POC, soogalooti, ​​naafo, iyo miskiin. Xilliga ay jirto dhibaatada caafimaad ee baaxadda leh, waxaan fursad u heysannaa inaan dib u eegno danaha dadka xiran, oo hadda ka mid ah kuwa halista ugu badan ugu jira dhaqan xumada iyo dayacaadda caafimaad.
Zine-kan ayaa ah isku-duwidda degdegga ah ee ilaha soo socda ee laga heli karo khadka tooska ah ee internet-ka si loogu taageero mashaariicda ku saleysan gargaarka ee wadaagga ah ee adeegyada u fidinaya bulshadooda iyadoo ay jirto fiditaanka cudurka COVID-19:
Inta safarka lagu jiro, waxaan la kulannaa dhammaan cudurada iyo dhibaatooyinka na dhiba marka aan la degno bulshooyinkeenna, laakiin sidoo kale dadka kale oo dhan.
18MR iyo UCONN AAASI
Halista Jaallaha ah ee Jaalaha ah
Zine midab leh oo bilaash ah oo ay ka buuxaan sawirro taariikhi ah, taariikh la ilaaway, iyo falanqeyn muhiim ah. Unmasking Yellow Peril waa iskaashi u dhexeeya 18 Million Rising iyo Machadka Daraasaadka Aasiya iyo Aasiya Ameerika ee Jaamacadda Connecticut. Mashruucan, waxaan ku raadineynaa inaan isku dhignay taariikhda dheer ee Yellow Peril, inaan soo bandhigno qaababkeeda waaweyn, oo aan iska caabinno waqtiga COVID-19.